Email Kushambadzira Akanaka Maitiro: Chii chinonzi IP Kudziya? | Martech Zone
Chitatu, Kurume 25, 2020 China, Kurume 26, 2020 Douglas Karr
Kana kambani yako iri kutumira mazana ezviuru emaimeri pakuburitsa, unogona kumhanya mune dzimwe nyaya dzakakomba nevatapi vevashandisi veinternet vachifambisa ese emaema ako mune junk folda. ESPs dzinowanzo vimbisa kuti vanotumira email uye vanowanzo taura nezve yavo yepamusoro dhirivhari mitengo, asi izvo chaizvo zvinosanganisira kuendesa email mu junk folda. Kuti unyatsoona yako inbox kuburitswa, iwe unofanirwa kushandisa yechitatu-bato chikuva senge vedu vatinoshanda navo 250ok.
Yese sevha inotumira email ine IP kero inosanganisirwa nayo, uye ISPs inochengetedza madhairekitori eaya IP kero uye mangani mabhureki uye spam zvichemo zvavanogamuchira kubva kuvashandisi vavo paemail yakatumirwa kubva kune ayo IP kero. Hazvina kujairika kune mamwe maIPs kuti vatore zvichemo zvishoma uye nekukurumidza nzira dzose mamwe maemail kune junk folda panzvimbo yebhokisi reinbox.
Kutamira kune Nyowani Email Service Provider
Nepo tsamba yako yekunyorera ichigona kuve 100% yepamutemo vanyoreri vakasarudza kupinda, kana zvakapetwa kaviri kupinda, kune ako ekutengesa maemail… kutamira kune mutsva email sevhisi webasa uye kutumira kune rako rese runyorwa kunogona kupangidza kuparadzwa. Zvichemo zvishomanana zvinogona kuita kuti IP kero yako iiswe mureza uye hapana munhu achagamuchira email yako mubhokisi ravo rekunyora.
Seyakanakisa tsika, kana vakatumira hombe vari kutamira kune mutsva email service provider, zvinokurudzirwa kuti IP kero ive kudziirwa. Ndokunge, iwe chengetedza yako iripo email sevhisi mupi nepo uchiwedzera huwandu hwemameseji iwe aunotumira kuburikidza neshumiro nyowani… kudzamara iwe wavaka mukurumbira weiyo nyowani IP kero. Nekufamba kwenguva, unogona kufambisa meseji yako asi haumbodi kuzviita panguva imwe chete.
Email Kushambadzira: Chii chinonzi IP Inodziya?
Kungofanana nekudziya kumusoro kunosanganisira kuwedzera zvishoma nezvishoma mukuwedzera kwechiitiko chemuviri kudziisa mhasuru uye kudzikisa njodzi yekukuvara, IP kudziya ndiyo nzira yekuwedzera kwakarongeka kwehuwandu hwemushandirapamwe svondo rega rega muiyo IP kero nyowani. Kuita izvi kunobatsira mukumisikidza yakanaka kutumira mukurumbira neInternet Service Provider (ISPs).
Smart IP Inodziya: Yekutanga Stride yeEndaneti Kugoneswa
IP Inodziya Infographic
Iyi infographic kubva kuUplers inotsanangura uye inoratidza yakanakisa maitiro e kudziya yako IP kero nemupi wako mutsva webasa reemail, achikufambisa nematanho mashanu akakosha:
Ita shuwa kuti iwe unoteedzera ese email kuendesa akanakisa maitiro usati watumira iyo yekutanga mijenya yeemail yeIP kudziya
Yako yakatsaurirwa IP inofanirwa kuve neye pointer rekodhi yakamisikidzwa mune yako reverse DNS (Domain Name System).
Chikamu chevanyoreri veemail zvinoenderana nekubatana kwavo nemaemail ako apfuura.
Kiyi yekubudirira kwe IP kupisa kuri kuwedzera zvishoma nezvishoma huwandu hwemaemail iwe aunotumira.
Ita post-kutumira hutsanana.
Ivo zvakare vanonongedza kumwe kusarudzika neakananga eInternet Service Provider (ISPS):
Yahoo, AOL, uye Gmail zvinopa dzimwe nyaya dzekupaza nekuparadzanisa maemail mune discrete bulks, nekudaro kunonoka kuendesa email. Ichagadziriswa kana iwe ukangotumira mamwe maemail ane akanaka metric.
Kunonoka kwakajairika kuAOL, Microsoft, uye Comcast. Uku kunonoka kana mazana mana negumi nemaviri emabhureki vanozoedza kwemaawa makumi manomwe nemaviri. Kana isingakwanise kununurwa mushure menguva iyoyo, vanozobhururuka senge 421XX uye rekodhi yekubheja ichachengetwa se 72 kukanganisa. Kamwe zita rako parinokura, hapazovi nekumwe kunonoka.
Tags: AOLcomcastemail service providerGmailinternet service providerip kupisaisphofisiYahoo